Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Leon Bailey Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Leon Bailey na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka ha buru,
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ịgba egwu Jamaica. Lifebogger na-amalite site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, anyị akwadebela oge mbụ ọ tozuru eto - nchịkọta zuru oke nke Leon Bailey's Bio.
Dị ka Raheem Sterling - laa azụ n'oge - ọ bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ na-eto eto na-eto eto na Europe.
Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole maara banyere nke Leon Bailey ọgba aghara gbagoro na Kingston ruo Leverkusen. Anyị weghaara Life Life Akụkọ ya na ebuteghị ya ọzọ, ka anyị bido.
Leon Bailey Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha 'Chippy'. Leon Patrick Bailey Butler mụrụ na 9th nke August 1997 na Kingston City na Jamaica.
A mụrụ onye Jamaica na papa m amachaghị, nne na-ahụ anya, ma nwee nna nkuchi - Craig Butler.
Zute nna nkuchi Leon Bailey, Craig Butler na nne ya.
Leon Bailey nọrọ oge nwata ya na Cassava Piece, mpaghara a na-ahụta dịka otu n'ime mpaghara kachasị eme ihe ike na Kingston, Jamaica.
N'oge gara aga, Poda ogbenye na-achị, ọ dịkwa mfe ụmụaka dị ka Bailey ịghọ ndị ahịa ọgwụ ọjọọ.
N'ụzọ dị mma, football nyere ya ụzọ mgbapụ site na ịkwa iko zuru ebe niile. Leon Bailey hụrụ egwuregwu ahụ n'anya nke ukwuu ma ghara ilebara ihe ọ bụla anya, gụnyere agụụ.
Ọ dịghị mgbe ọ chọrọ nri mama ya ma ọ bụrụhaala na bọl dị na ụkwụ ya. Dị ka ya:
“Football họọrọ m. Kemgbe amụrụ m, naanị ihe m chọrọ ime bụ ịgba ihe niile ụkwụ - ihe ọ bụla ị tinyere m n’ihu.
Ana m agwa ndị mmadụ mgbe niile na amalitere m n'afọ moma n'ihi na kemgbe m pụtara, m na-agba ihe niile ụkwụ. ”
Leon Bailey Ezinụlọ:
Akụkọ ndụ ndị na-agba ọsọ ndụ bụ otu n'ime ọtụtụ ihe atụ nke akụkọ gbasara akụrụngwa. Ebe ọ bụ na ndị mụrụ ya dara ogbenye, Leon enweghị nsogbu nke oge ntorobịa na ntorobịa ya.
Eziokwu bụ, ọ bụ nnukwu ọchịchọ ma ghara ịhapụ echiche nke mere ka ọ gaa. O chetara na:
“Mgbe m leghachiri anya azụ ndụ m na Cassava Piece ọ dịghị mfe, mana ọ dịghịkwa njọ. Ọ bụ mpaghara dara ogbenye, mana ọ ghọrọ m onye m na-echeghị na m ga-abụ.
Enwere m ọmarịcha okporo ụzọ. Enwere m ike ịghọta ndụ n'akụkụ dị iche iche ma enwere m nnukwu ekele na m si na gburugburu ebe dị otu a. ”
Anyị ma na ọ bụ onye mba Jamaica. Otú ọ dị, mgbọrọgwụ ya gbatịpụrụ gabiga Caribbean.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nchọpụta anyị na-egosi na o nwere agbụrụ ezinụlọ Bekee, mmepe nke na-egosi na ọ nwere ike ịbụ onye agbụrụ.
A zụlitere Leon Bailey na-eto eto na mpaghara Kingston nke Jamaica.
Leon Bailey Biography - Akụkọ nke Football:
Site na mgbe Bailey dị afọ isii, ọ sonyeere Phoenix All-Star Academy na Kingston. Ọ bụ Craig Butler nwere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ, nwoke ga-emesị bụrụ nna nkuchi Bailey.
N'agbanyeghị na ọ bụ nwata, Bailey ji egwuregwu bọọlụ kpọrọ ihe ma mara ihe ọ chọrọ. Ndị maara ya - n'ime nne na nna ya - ga - agba akaebe abụọ.
Nke mbụ, ụgbọala ya abụghị nke abụọ na nke abụọ, ọhụụ ya doro anya.
Foto nwatakiri nke onyinye football di ito n'oge o di na ulo akwukwo nke Phoenix.
Ndụ mbido na football:
N'ihi nwa okoro ahụ, obi tọrọ nna ya bụ Craig ike iji kpọrọ ya maka ule na Europe. Bailey anọghị naanị na njem ahụ.
Ya na ụmụnne nwoke abụọ ndị ọzọ gụnyere Kyle Butler (nwa nwoke Craig) na Kevaughn Atkinson (nwa ọzọ).
Mgbe ha rutere Europe, ọ bụ oge oyi, ọnọdụ ihu igwe nke dịịrị ya na ụmụnne ya nwoke. Ka o sina dị, Kevaughn, Kyle na Bailey gbanwere.
Mgbe ha debanyere aha nwata ahụ na ụlọ ọrụ Austrian Liefering, Kevaughn Atkinson debara aha na USK Anif. Kyle Butler sokwa n'akụkụ Austrian.
Zute Leon na ụmụnne ya ndị nwoke na Europe.
Leon Bailey Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Onye na-agba ọsọ ahụ anaghị edekọ uru na-aga n'ihu na Liefering n'ihi na iwu FIFA machibidoro ịbanye na ndị na-abụghị ndị EU n'okpuru 18. N'ihi ya, ọ kwagara n'akụkụ Slovak AS Trencin, ebe ọ debere ihe mgbaru ọsọ bọọlụ ya ruo mgbe ọ gbanwere 18 na 2015.
You hụla foto a nke nwatakịrị n'oge ya na AS Trencin?
Ọ bụ n'otu afọ ahụ ka ọ bịanyere aka na klọb Belk Genk wee mee njem mbụ ya. Ka ọ na-erule ngwụsị nke mkpọsa izizi ya na 2015/16, ọ bụworị ihe dị egwu nke onye okpukperechi mgbe o meriri otu ebumnuche kachasị mkpa Genk nke afọ ha.
Leon Bailey Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'ịbụ onye nwere ndekọ egwu dị egwu na nwata, Bailey nọ na radar nke ọtụtụ nnukwu klọb. Otú ọ dị, ọ sonyeere Bayer Leverkusen n'ihi na ọ nwere ebe dị nro maka ndị na-eto eto dị elu dị ka Kai Havertz.
N'oge ịbanye na Bayer Leverkusen na 2017.
Mgbe ọ banyere ebe obibi ọhụrụ ya, 'Chippy' ji nwayọ hụ ụkwụ ya na BayArena. Ọganihu ya bịara n'oge afọ 2017/18 football mgbe ọ debara aha isii aka na ihe mgbaru ọsọ itoolu iji nyere Die Werkself aka ịkwụsị nke ise ma ruo eru maka Njikọ Europa.
Ọ bụrụhaala na Leon nọgidere bụrụ akụkụ nke otu egwuregwu, enwere enweghị oke maka Bayer Leverkusen. Ekele niile maka ngwa ngwa okike nke ọ na-agbanye, ndị ọzọ anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ Leon Bailey Dating?
Chippy no na ima. Ọ bụghị naanị na egwuregwu, kama ya na enyi nwanyị ya na nwunye ya ga-abụ. Aha ya bụ Stephanie Hope.
Ọ gaghị esiri ike ịhụ enyi nwanyị ya n'ihi na Bailey na-akpọrọ ya mgbe niile ka ọ nye ya onyinye abalị na ezumike. Site na npụta dị otu a, ọ ji aghụghọ kwupụta ebum n'uche ya nke ịdata na ịma mma n'oge na-adịghị anya.
Leon Bailey na enyi ya nwanyị Stephanie Hope.
You maara? Hope Stephanie Hope abụghị naanị enyi nwanyị kamakwa nne nwa nwoke Bailey, Leo Cristiano.
Ekwela ka ọ gbagọọ agbagọ, Bailey akpọghị nwa ya aha Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. The "Leo" si Leon mgbe "Cristiano" kwukwara n'ihi na bailey chere na ọ rhymes ọma na "Leo".
Leon Bailey na-etinye oge dị mma na Leo Cristiano.
Ndụ Leon Bailey Ezinụlọ:
Nwere ike ịkpọ onye amamihe bọọlụ ọ bụla nke na-enweghị ngalaba nuklia nke ndị na-eche banyere ya karịa ndị ọzọ? Mba, n'ezie.
Ha niile bụ ezinụlọ, na Jamaican abụghị ihe anaghị akwụ ụgwọ. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara nne na nna Leon Bailey na ụmụnne ya. Ọzọkwa, anyị ga-eme ka eziokwu banyere ndị ikwu Bailey dị ebe a.
Banyere Leon Bailey Nna nkuchi:
Ọzọkwa, enweghị ndekọ banyere nna nna ya nke teknụzụ. Na ederede a, naanị nna nwere ndụ na ndụ ya bụ nna nkuchi - Craig Butler. Ọ bụ onye guzobere Phoenix All-Star Academy na Kingston, Jamiaca.
Foto a na-adịghị ahụkebe nke Leon Bailey na nna nkuchi ya, Craig Butler.
Craig Butler achụọla ọtụtụ ihe iji hụ na Bailey na ụmụnne ya kuchiri ya bụ Kyle Butler (nwa mụrụ Craig) na Kevaughn Atkinson ga-enwe ihe ịga nke ọma na ndụ.
Ọbụna mgbe ihe anaghị arụ ọrụ dịka e siri chee, obi ike Craig kpaliri ụmụ nwanyị ahụ ichekwa ma mesịa merie nsogbu.
Banyere Leon Bailey nne:
Mama mama nwanyị na-agba ọsọ na-akwado ma na-ahụ n'anya. Nke ahụ na-akọwa ihe kpatara Bailey ji agba mbọ mgbe nile iji kwụghachi ya ụgwọ ezumike maka ọmarịcha njem ezumike.
Onye na-agba ọsọ ọsọ maara na ọ gaghị ekwe omume ịkwụ ụgwọ nne ya kpamkpam. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-achọ ime ya.
Leon Bailey na ezumike ya na nne ya.
Banyere ụmụnne Leon Bailey:
Onye amụrụ na Jamaica nwere naanị ụmụ nwoke kuchiri ya. Anyị buru ụzọ kpọọ aha ha Kyle na Atkinson. Ha na-eguzosi ike n’ihe nye ibe ha ma na-ekekọrịta nkekọ siri ike. Enweghị ndekọ banyere ụmụnne ya.
Banyere ndị Leon Bailey:
Ọsọ dribbler nwere nne na nna ochie Bekee. O dochabeghị anya onye nne na nna Leon Bailey kwuru na ọ bụ nna nna England. Enwekwara ihe mkpuchi nke njirimara nke nwanne nna nna ya, nwanne nne ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Leon Bailey Ndụ Nke Onwe:
Isnye bụ Chippy karịrị ịbụ onye ọrụ ntanetị na-enyere aka Leverkusen na-agbapụ n'elu tebụl?
Nke mbu, ihe omuma anyi na-ekwu okwu oma banyere ya dika onye obi uto, onye oru ike na ala onye di nma imeghari oru na obi uto.
Ọ dịghị agọnahụ onwe ya okomoko nke ezumike.
Onye ọgba bọọlụ hụrụ oriri na izu ike nnukwu na mmiri. Ọzọkwa, ọ dị ukwuu na-eme nnukwu ngosi na ihe omume. Ozokwa, ọ naghị achọ ka ya na ezinụlọ ya nọrịa, karịchaa nwa ya.
Ndụ Leon Bailey:
Ka anyị kwuo maka otu onye ọsọ na-eme ma na-emefu ego ya. Iji malite, ọ na-enweta ụgwọ ọnwa kwa izu nke € 75,000. Ọzọkwa, ọnụ ahịa ya ruru nde € 2.3 (atụmatụ 2020).
Site na ịkwụ ụgwọ dị otu a kwa ọnwa, Bailey anaghị agọ onwe ya ihe ndụ. Seen hụla ụgbọala ndị na-arụzi ụgbọala n'ụlọ nnukwu ụlọ ya? Ha dị egwu. Obi abụọ adịghị ya na ọ na-ebi ụdị ndụ ụmụaka na-eto eto na-arọ nrọ.
Lee ka onye na-agba ọsọ na-apụ n'ụgbọ ala ya dị egwu.
Eziokwu Banyere Leon Bailey:
Iji mechie edemede a banyere akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ obere eziokwu gbasara ya.
ARLỌ / NTA
Kwa Afọ: € 3,900,000
Ọnwa kwa: € 325,000
Kwa Izu: € 75,000
Kwa :bọchị: € 10,714
Kwa elekere: € 446.
Nkeji nkeji: € 7.43
Sekọnd: € 0.12
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Leon Bailey's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - Banyere aha ya:
Wonder na-eche ihe kpatara eji akpọ winger Chippy? Nna ya nyere ya aha ahụ n'ihi na ọ dị ka agwa Alvin site na fim Chipmunks.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ naanị ndị ezinụlọ na ndị enyi ya nso na-akpọ ya aha ahụ.
Dị ka Alassane Plea, Leon na-ata ahụhụ site na njirimara zuru oke - njirimara nke na-adịghị ekwu okwu nke ọma maka ike Bundesliga.
Ike ya nke 85 dị ntakịrị maka winger nke dị mma na ụkwụ abụọ, ngwa ngwa, nwee nka, na-akpali akpali. Anyị kwenyere na 84/90 ga-egosipụta eziokwu dị ugbu a gbasara ike dị ịtụnanya ya.
Ọ dịtụ mma, mana ọ ga-aka mma.
Bailey ekwughị banyere okpukpe ya. Ọ naghị agafe onwe ya mgbe ọ na-abanye n'olulu ahụ, ahụbeghị ya ka ọ na-atụgharị ekpere.
Agbanyeghị, enwere nnukwu ohere nne na nna Leon Bailey bụ ndị Kristian, ọkachasị ka ọ kpọrọ nwa ya nwoke Cristiano.
Eziokwu # 5 - Enyi na Usain Bolt:
Chippy na Usain Bolt bụ ndị Jamaica. Tụkwasị na nke a, ndị egwuregwu abụọ dị nso, Bailey anaghịkwa eme ihere site n'ikwu otú onye na-agba ọsọ mbụ si akwado.
Ha abụọ bụ ndị egwuregwu kachasị mma si n'àgwàetiti Caribbean pụta.
“M ga-asị na anyị nọ n’ezigbo mma. Usain Bolt nọ m mgbe niile. SUSUỌ, Ọ akụziwo ọtụtụ ihe ndụ. Bolt bụ nwoke dị ịtụnanya ma na-atọ ụtọ ịnọnyere. ”
Onye na - agba ọsọ bọọlụ n’akara mmeri, Usain Bolt.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na Leon Bailey bụ nwata na akụkọ ndụ ya. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị ikwere na ntachi obi bụ isi ihe na-eweta mmeri na nsogbu. Dị nnọọ ka Bailey akwụsịghị ọrụ ya na-agbanwe agbanwe nke gbasara mba 6.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna midfielder ntị. Nke a gụnyere nna nkuchi ya Craig Butler, ụmụnne ya na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ maka nkwado ha na ọrụ ya n'okwu na omume.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inye akụkọ nwata na akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma, kpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ okwu n'okpuru maka echiche gị gbasara Jamaica.
Iji mee ka agụụ gụọ akụkọ ndụ gị, anyị achịkọtara akụkọ ndụ ya na tebụl.
Aha zuru ezu: Leon Patrick Bailey Butler.
aha otutu: "Chippy."
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 9 nke Ọgọstụ 1997.
Ebe amụrụ onye: Kingston City dị na Jamaica.
Elu na Cm: 178 UM.
Egwuregwu Ọnọdụ: Akuko
Ndị nne na nna: Craig Butler (nna nkuchi).
Ụmụnne: Kyle na Atkinson (ụmụ nkuchi).
Nwa nwanyi: Stephanie Olileanya.
Ihe omume: Oriri na oge iji soro ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Ezigbo Net: 2.3 nde (atụmatụ 2020).